“Mone M’adansefo”​—Yesaia 43:​10 | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Moore Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Yehowa anom asɛm ni: ‘Mone m’adansefo.’”—YES. 43:10.
Dɛn na Israelfo no yɛe a ɛkyerɛ sɛ na wɔyɛ Yehowa adansefo?
Onyankopɔn din no kyerɛ sɛn?
Dɛn na yɛbɛyɛ de akyerɛ sɛ yɛn ani sɔ hokwan a yɛanya sɛ Onyankopɔn din da yɛn so no?
1, 2. (a) Sɛ yɛka sɛ obi yɛ ɔdansefo a, ɛkyerɛ sɛn, na dɛn na wiase dawurubɔ nnwuma no nka nkyerɛ nkurɔfo? (b) Adɛn nti na Yehowa nhia wiase dawurubɔ nnwuma na wɔaka ne ho asɛm?
SƐ YƐKA sɛ obi yɛ ɔdansefo a, ɛkyerɛ sɛn? Nsɛm asekyerɛ nhoma bi kae sɛ ɔdansefo ne “nea ohu biribi bɔ ho amanneɛ.” Atesɛm krataa bi wɔ South Africa a wɔato din The Witness (anaa Ɔdansefo). Wɔatintim saa atesɛm krataa yi bɛboro mfe 160 ni. Krataa yi din fata no, efisɛ n’atirimpɔw ne sɛ asɛm biara a ɛde bɛto gua no, ɛbɛka nea esii no ara. Atesɛm krataa yi samufo a odi kan hyɛɛ bɔ sɛ krataa no “bɛka nokware, nokware a ɛwom nyinaa; ɛremfa bi nka ho, na ɛrenyi bi mfi mu.”
2 Nanso awerɛhosɛm ne sɛ wiase dawurubɔ nnwuma ahorow ntaa nka nokware. Wokyinkyim nsɛntitiriw pii na ebi nso wɔ hɔ a wɔmmɔ so koraa. Wɔnka Onyankopɔn ho nokwasɛm. Nanso asɛm no mpo ne sɛ ade nyinaa so Tumfoɔ no nhia wiase nsɛnkyerɛwfo na wɔabɔ ne ho dawuru. Onyankopɔn nam odiyifo Hesekiel so kae sɛ: “Amanaman no behu sɛ mene Yehowa.” (Hes. 39:7) Yehowa wɔ nnipa bɛyɛ ɔpepem nwɔtwe wɔ wiase nyinaa a wɔbɔ ne ho dawuru. Adansefo dɔm yi ma nkurɔfo hu sɛnea ɔne adesamma dii tete no ne sɛnea ɔne nnipa di nnɛ. Bio nso wɔma nnipa hu nea Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ ɔbɛyɛ ama adesamma daakye. Sɛ yebu adansedi adwuma yi sɛ ade titiriw wɔ yɛn asetenam a, ɛnde na edin a Onyankopɔn de ama yɛn no fata yɛn. Ɛyɛ din bɛn? Yesaia 43:10 ka sɛ: “Yehowa anom asɛm ni: ‘Mone m’adansefo, m’akoa a mapaw no.’” Enti sɛ yɛma asɛnka adwuma no didi yɛn mu a, ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ Yehowa Adansefo ampa.
3, 4. (a) Bere bɛn na Bible Asuafo no faa din foforo no, na ɛkaa wɔn sɛn? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.) (b) Nsɛmmisa bɛn na yɛrebesusuw ho?
3 Yehowa ahyɛ yɛn anuonyam sɛ ɔde ne din ato yɛn so, efisɛ ɔne “mmeresanten Hene.” Ɔno ankasa kae sɛ: “Eyi ne me din de kosi daa, na eyi na wɔmfa nkae me awo ntoatoaso nyinaa mu.” (1 Tim. 1:17; Ex. 3:15; fa toto Ɔsɛnkafo 2:16 ho.) Afe 1931 no, Bible Asuafo faa edin Yehowa Adansefo. Nnipa bebree kyerɛw krataa de kyerɛe sɛ wɔn ani gye saa din no ho paa. Asafo bi a ɛwɔ Canada kyerɛwee sɛ edin foforo no ama wɔasi wɔn bo sɛ wɔbɛbɔ wɔn bra ma ahyɛ Yehowa anuonyam.
4 Ɛnde, dɛn na wobɛyɛ de akyerɛ sɛ w’ani sɔ hokwan a wɔanya sɛ Onyankopɔn din da wo so no? Wubetumi de Kyerɛwnsɛm no akyerɛ nea enti a Yehowa frɛ yɛn n’Adansefo?
ONYANKOPƆN ADANSEFO A NA WƆWƆ TETE BERE MU
5, 6. (a) Ɔkwan bɛn so na awofo a na wɔwɔ Israel di Yehowa ho adanse? (b) Dɛn bio na na ehia sɛ awofo yɛ? Adɛn nti na ɛsɛ sɛ awofo yɛ saa nnɛ?
5 Yesaia bere so no, na Israelni biara yɛ Yehowa ‘dansefo,’ na na ɔman mũ no nyinaa yɛ Onyankopɔn ‘akoa.’ (Yes. 43:10) Sɛ yɛfa awofo sɛɛ a, ɔkwan baako a na wɔfa so di adanse ne sɛ wɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn mma ma wɔahu sɛnea Onyankopɔn ne wɔn nananom dii. Wo deɛ yɛnhwɛ Twam afahyɛ no. Bere a Yehowa kae sɛ Israelfo nni Twam no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ da bi mo mma bisa mo sɛ, ‘Amanne yi kyerɛ dɛn?’ a, monka sɛ, ‘Ɛyɛ twam afɔre a yɛbɔ ma Yehowa, efisɛ bere a ɔrekunkum Egyptfo no, otwaam faa Israelfo afie ho wɔ Egypt, na oyii yɛn afie fii mu.’” (Ex. 12:26, 27) Ebia awofo maa wɔn mma hui sɛ Farao ampene sɛ ɔbɛma Israelfo no akɔ sare so akɔsom Yehowa. Ɔhene no kae sɛ: “Hena ne Yehowa a mintie no mma Israel nkɔ?” (Ex. 5:2) Bio awofo bɛma wɔn mma ahu nea Yehowa de buaa Farao ne nea ɔyɛ maa obiara hui sɛ ɔno ne Otumfoɔ Pumpuni no. Ɔde ɔhaw du baa Egypt asase so, na ogyee Israelfo fii Egypt asraafo nsam wɔ Po Kɔkɔɔ no mu. Israel man no ankasa dii adanse sɛ Yehowa ne nokware Nyankopɔn, Ɔseadeɛyɔ no.
6 Israelni biara a na n’ani sɔ hokwan a wanya sɛ Yehowa din da ne so no renka n’ano ntom. Ɔkwan biara so ɔbɛka nneɛma akɛse a Yehowa ayɛ yi akyerɛ ne mma ne ne nkoa. Bio nso na Israelfo no nim sɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ kronn. Yehowa kae sɛ: “Monyɛ kronkron, efisɛ me Yehowa mo Nyankopɔn, meyɛ kronkron.” Enti na ɛsɛ sɛ wɔtete wɔn mma ma wodi Yehowa ahyɛde so na wɔn nso wɔyɛ kronn. (Lev. 19:2; Deut. 6:6, 7) Ɛnnɛ nso ɛsɛ sɛ awofo tete wɔn mma ma wɔbɔ bra pa de hyɛ Onyankopɔn din anuonyam.—Monkenkan Mmebusɛm 1:8; Efesofo 6:4.
Sɛ yɛka Yehowa ho asɛm kyerɛ yɛn mma a, ɛma ne din ho ba nyam (Hwɛ nkyekyɛm 5, 6)
7. (a) Sɛ Israelfo tie Yehowa a, ɛka aman a wɔatwa wɔn ho ahyia no sɛn? (b) Esiane sɛ Onyankopɔn din da yɛn so nti, asodi bɛn na yɛwɔ?
7 Sɛ Israelfo yɛ aso tie Onyankopɔn a, ɔno nso hyira wɔn na ɛma ‘asase so aman nyinaa hu sɛ Yehowa din da wɔn so.’ Ɛba saa a, na wosuro Israelfo no. (Deut. 28:10) Nanso awerɛhosɛm ne sɛ, sɛ yɛhwɛ Israelfo abakɔsɛm nyinaa mu a, na wɔtaa yɛ Yehowa so asoɔden. Ɛreyɛ ara ni na wɔrekɔsom abosom. Ná Israelfo no tirim yɛ den te sɛ Kanaanfo anyame a na wɔsom wɔn no ara. Wɔde wɔn mma bɔɔ afɔre na wɔhyɛɛ ahiafo so katee. Nea wɔyɛe no yɛ kɔkɔbɔ ma yɛn. Enti ɛsɛ sɛ yesuasua Yehowa na yɛyɛ kronn, efisɛ ɔno ne Ɔkronkronni no, na ne din da yɛn so.
“HWƐ, MEREYƐ ADE FOFORO BI”
8. Adwuma bɛn na Yehowa de hyɛɛ Yesaia nsa, na dɛn na Yesaia yɛe wɔ ho?
8 Yehowa maa Yesaia bɔɔ Israelfo no kɔkɔ sɛ ɔbɛsɛe Yerusalem na nkurɔfo no bɛkɔ nkoasom mu. Nanso ɔka kaa ho sɛ ɔrebɛyɛ “ade foforo bi” na wagye Israel man no afi nkoasom mu. (Yes. 43:19) Na Yehowa nim nkurɔfo no komam, na ohui sɛ wɔrentie kɔkɔbɔ no. Nanso ɔmaa Yesaia kɔɔ so ara bɔɔ wɔn kɔkɔ. Sɛ wohwɛ Yesaia nhoma no ti baako kosi ti nsia a, wuhu sɛ ne fã kɛse no ara yɛ kɔkɔbɔ; ɛkyerɛ ɔsɛe a na ɛbɛba Yerusalem ne nkurow a atwa ho ahyia so. Bere a Yesaia tee sɛ ɔman no bɛsen wɔn kɔn no, na ɛhaw no, enti obisae sɛ ɔman no bepirim wɔn koma ‘akosi da bɛn’? Ɛnna Onyankopɔn kae sɛ: “Enkosi sɛ kurow yi bɛsɛe na adan amamfõ, na afie ada mpan a ɔdesani biara nni mu, na asase no asɛe koraa.”—Monkenkan Yesaia 6:8-11.
9. (a) Bere bɛn na Yerusalem ho nkɔm a Yesaia hyɛe no baa mu? (b) Kɔkɔbɔ bɛn na ɛsɛ sɛ ɛtena yɛn adwenem nnɛ?
9 Yesaia de mfe 46 bɔɔ ɔman no kɔkɔ. Ofii ne nkɔmhyɛ no ase wɔ Ɔhene Usia nniso no afe a etwa to mu, kyerɛ sɛ bɛyɛ mfe 778 ansa na Kristo reba. Na ɔkɔɔ so ara hyɛɛ nkɔm kosii Ɔhene Hesekia bere so, kyerɛ sɛ bɛyɛ mfe 732 ansa na Kristo reba. Enti wohwɛ a, Yehowa fii ase bɔɔ Israelfo no kɔkɔ mfe 125 ansa na Yerusalem resɛe. Babilonfo sɛee Yerusalem afe 607 A.Y.B. Sɛ wohwɛ bere a wofii ase bɔɔ ɔman no kɔkɔ ne bere a Yerusalem sɛee a, yehu sɛ Yehowa maa wɔn bere paa. Ɛnnɛ nso Yehowa ama n’asomfo rebɔ nkurɔfo kɔkɔ. Wɔama nnipa ahu nea ɛbɛba nnansa yi ara. Wɔde mfe pii na abɔ nkurɔfo kɔkɔ. Efi bere a yefii ase tintim Ɔwɛn-Aban no besi nnɛ, daa ɛbɔ dawuru sɛ ɛrenkyɛ Satan nniso bɔne no befi hɔ na Yesu Kristo Mfirihyia Apem Nniso no abesi anan.—Adi. 20:1-3, 6.
10, 11. Yesaia nkɔmhyɛ bɛn na ɛbaa mu maa Israelfo a wɔwɔ Babilon hui?
10 Yudafo pii brɛɛ wɔn ho ase maa Babilonfo, enti wonyaa wɔn ti didii mu, na wɔde wɔn kɔɔ Babilon. (Yer. 27:11, 12) Afei mfe 70 akyi no, Onyankopɔn nkurɔfo huu nkɔmhyɛ yi mmamu: “Yehowa, mo Gyefo, Israel Kronkronni no asɛm ni: ‘Mo nti mɛsoma akɔ Babilon akobubu nneduaban akyi adaban.’”—Yes. 43:14.
11 Nkɔmhyɛ no baa mu afe 539 A.Y.B. wɔ October mu, na wohwɛ ɔkwan a Yehowa faa so maa nkɔmhyɛ no baa mu a, ɛyɛ anika paa. Saa da no na Babilon hene ne ne mpanyimfo ahyia retow pon ahyɛ wɔn anyame anuonyam. Na abotesɛm a ɛwom ne sɛ wɔannya kuruwa biara annom wɔn nsa sɛ nkuruwa a wɔfa fii Yehowa asɔrefie hɔ wɔ Yerusalem no. Saa anadwo no ara Kores dii Media ne Persia asraafo anim kɔsɛe Babilon, na wɔyɛɛ ahemman no dosodoso. Bɛyɛ afe 538 anaa 537 A.Y.B. no, Kores kae sɛ Yudafo no nsan nkɔ Yerusalem nkɔkyekye Onyankopɔn asɔrefie no. Yehowa hwɛe sɛ akwantu no bɛyɛ dwoodwoo. Yesaia hyɛɛ eyi nyinaa ho nkɔm na ɛbaa mu pɛpɛɛpɛ. Onyankopɔn kae sɛ Yudafo a wɔasan aba wɔn kurom no yɛ ‘ɔman a wanwene wɔn afa sɛ wɔnka n’ayeyi nkyerɛ.’ (Yes. 43:21; 44:26-28) Bere a Israelfo san kɔɔ Yerusalem kosii Yehowa asɔrefie no wiei no, wɔn ankasa dii adanse sɛ Yehowa ne nokware Nyankopɔn koro pɛ a odi ne bɔhyɛ biara so.
12, 13. (a) Ɛhefo na wɔbɛkaa Israelfo ho ne wɔn som Yehowa? (b) Bere a “nguan foforo” no reboa “Onyankopɔn Israel” no, dɛn na wɔhwehwɛ fi wɔn hɔ, na anidaso bɛn na ɛda hɔ retwɛn wɔn?
12 Bere a Israelfo san kɔɔ wɔn kurom no, ahɔho mpempem bɛkaa wɔn ho ne wɔn som Yehowa. Akyiri yi amanaman mufo bebree san bɛkaa wɔn ho. (Esra 2:58, 64, 65; Ester 8:17) Ɛnnɛ nso “nguan foforo” no mu “nnipakuw kɛse” abɛka Kristofo a wɔasra wɔn anaa “Onyankopɔn Israel” ho ne wɔn resom. (Yoh. 10:16; Adi. 7:9, 10; Gal. 6:16) Wɔn a wɔasra wɔn ne nnipakuw kɛse no nyinaa ani gye ho sɛ wɔfrɛ wɔn Yehowa Adansefo.
13 Akwannya nwonwaso bi da hɔ retwɛn nnipakuw kɛse no wɔ wiase foforo no mu. Bere a wɔanyan awufo aba nkwa mu no, wɔbɛma wɔahu tebea a Yehowa Adansefo faa mu wɔ Satan wiase no awiei bere mu. Nanso hokwan a ɛte saa remma kwa; ɛsɛ sɛ yemia yɛn ani ma yɛn abrabɔ yɛ kronn nnɛ. Ɛno mpo no, nokwasɛm bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yegye tom. Ɛne sɛ, sɛ yɛyere yɛn ho kosi he koraa a, yɛda so ara yɛ nnipa a yɛtɔ sin, enti ɛsɛ sɛ daa yɛsrɛ Yehowa hɔ bɔne fafiri. Yɛnyɛ pɛ, enti ɛyɛ nidi kɛse paa sɛ Yehowa de ne din kronkron no ato yɛn so.—Monkenkan 1 Yohane 1:8, 9.
14. Dɛn na edin Yehowa kyerɛ?
14 Ɛyɛ nidi kɛse sɛ Onyankopɔn din da yɛn so. Nea ɛbɛboa yɛn ma yɛahu eyi yiye no, momma yɛnhwɛ nea edin no kyerɛ. Edin Yehowa no fi Hebri asɛmfua bi a ɛkyerɛ nea ɛma biribi “ba” mu. Enti yetumi ka sɛ Onyankopɔn din “Yehowa” no kyerɛ “Nea Ɔma Ɛyɛ Hɔ.” Eyi boa yɛn ma yehu onii ko a Yehowa yɛ. Ɔno ne Ɔbɔadeɛ a ɔyɛɛ biribiara a ɛwɔ soro ne asase so. Bio nso sɛ Yehowa bɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ biribi a, ɔkwan biara so n’apɛde bɛyɛ hɔ. Satan ne n’apamfo biara nni hɔ a wobetumi ayɛ wɔn ho osiakwan ama Yehowa atirimpɔw aka nsensɛnmu.
15. Sɛ yɛhwɛ asɛm a Yehowa ka kyerɛɛ Mose no a, dɛn na yehu fa ne din no ho? (Hwɛ adaka a wɔato din “ Edin no Mu Dɔ.”)
15 Bere a Onyankopɔn somaa Mose sɛ onkoyi ne nkurɔfo mfi Egypt no, ɔkaa biribi, na eyi ma yehu ne din no ho nsɛm pii. Kyerɛwnsɛm no ka sɛ: “Onyankopɔn ka kyerɛɛ Mose sɛ: ‘MƐYƐ ME HO NEA MEPƐ SƐ MEYƐ.’ Na ɔde kaa ho sɛ: ‘Ka kyerɛ Israelfo no sɛ, “MƐYƐ na asoma me mo nkyɛn.”’” (Ex. 3:14) Enti biribiara a ɛsɛ sɛ Yehowa yɛ ma n’atirimpɔw ba mu no, ɔbɛyɛ. Sɛ yɛhwɛ Israelfo sɛɛ a, Yehowa yɛɛ nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ biara de gyee wɔn fii nkoasom mu, ɔbɔɔ wɔn ho ban, ɔmaa wɔn akwankyerɛ, na ɔmaa wɔn honam fam nneɛma ne biribiara a ɛbɛboa wɔn ma wɔatumi asom no.
NEA YƐDE KYERƐ ANISƆ
16, 17. (a) Dɛn na yɛbɛyɛ de akyerɛ sɛ yɛn ani sɔ hokwan a yɛanya sɛ Onyankopɔn din da yɛn so no? (b) Dɛn na yebesusuw ho wɔ asɛm a edi hɔ no mu?
16 Yehowa nsesae. Ɛnnɛ nso ɔda no adi sɛ ne din fata no. Ɔma yɛn nsa ka biribiara a yehia na yɛatumi asom no. Honam fam nso, onnya yɛn mu; ɔma yɛn nea yehia biara. Nanso Onyankopɔn din ma yehu biribi foforo fa ne ho. Ɛyɛ dɛn? Yehowa betumi afa n’abɔde bi so ama n’atirimpɔw abam. Yɛmfa asɛnka adwuma no nyɛ nhwɛso. Ɔnam n’Adansefo so ma adwuma no kɔ so. Sɛ yɛtena ase susuw asɛm no ho a, ɛbɛka yɛn na biribiara a yɛbɛyɛ no, yɛama Onyankopɔn din no ho aba nyam. Onua mmɔdenbɔfo bi a ne din de Kåre a ofi Norway adi mfe 84, na ɔde mfe 70 ayɛ asɛnka adwuma. Ɔkae sɛ: “Mihu sɛ ɛyɛ nidi kɛse paa sɛ meresom mmeresanten Hene Yehowa. Afei sɛ metena ase hwɛ sɛ Onyankopɔn din kronkron no da nnipa bi so na me nso meka wɔn ho a, mihu sɛ ɛyɛ akwannya kɛse. Wo deɛ hwɛ sɛ maka Bible mu asɛm bi akyerɛ nkurɔfo na wɔde anigye aso mu! Anokwa, ɛyɛ hokwan kɛse. Sɛ mema wohu Kristo agyede afɔre no ne ɔkwan a ɛbɛboa yɛn ma yɛanya daa nkwa wɔ wiase foforo a asomdwoe ne trenee wom no a, na me koma atɔ me yam fɔmm.”
17 Baabi wɔ hɔ a ɛyɛ den sɛ yebenya nnipa a wɔbɛyɛ aso atie Onyankopɔn ho asɛm. Nanso sɛnea Kåre kae no, sɛ yɛyɛ brɛbrɛ nya obi a n’ani gye nokware no ho na yɛma ohu Yehowa din no a, yɛn ani gye paa. Nanso asɛmmisa bi wɔ hɔ a yɛpɛ sɛ yesusuw ho: ‘Yɛbɛyɛ dɛn ayɛ Yehowa Adansefo na bere koro no ara yɛayɛ Yesu adansefo?’ Yebesusuw asɛmmisa yi ho wɔ adesua asɛm a edi hɔ no mu.
Edin no Mu Dɔ
“Nea Ɔma Ɛyɛ Hɔ”
Nea enti a edin no fata no
Yehowa na ɔbɔɔ nneɛma nyinaa
Ɔhwɛ sɛ nea wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ biara bɛba mu na n’apɛde nso ayɛ hɔ
Nea ɛma yehu fa ne ho
Biribiara a ɛsɛ sɛ ɔyɛ ma ne bɔhyɛ ba mu no, ɔbɛyɛ
Obetumi afa n’abɔde so ayɛ biribiara a ehia ma n’apɛde ayɛ hɔ
Biribiara nni hɔ a ɔrentumi nyɛ anaa ɔrentumi mma ɛnyɛ hɔ mma n’atirimpɔw mmam